Kubada Koleyga Horseed – Page 2 – Horseed Sports Club
Kooxda Dekedaha oo dhegaha ka garaacday Heegan, furitaanki ciyaaraha horyaalka
Cayaartii bilaawga u ahayd Horyaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo gebageboowday taasoo dhexmartay Naadiyaga Dekedaha iyo Heegan waxaana Cayaartaas 1-0 ku badisay kooxda Dekedaha. Dekedaha oo uu Hogaamiyo Macalin Cabdi Joon ayaa Waxaa Goolka ay heleen dhamaadkii Cayaarta daqiiqadihii dheeriga ahaa ee lagu daray Waxaana Goolka qura u dhaliyey Xidigga Lagu magacaabo C/qaadir yiriis. Kooxda Heegan
Wax qabadka Jenaraal Caynte iyo guulaha Horseed + Sawirro
Naadiga kubbada cagta Horseed isbadal wayn ayaa lagu sameeyay waxaana hogaamiye looga dhigay mas’uul wax badan ka badalay sidii ay u shaqayn jireen maamulkii hore ee kooxda, waxaana la yiraa Jenaraal Caynte isaga ayaana la rumeysanyahay in uu sabab u yahay guulaha uu gaaray Naadiga Horseed. Jeneraal Caynte markii uu qabtay hoggaanka kooxda ayaa durba la
Daawo guushii xidigaha Horseed ay ku hantiyeen koobka Jen. Daa’uud
Waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa xidigaha kooxda horseed ee FC iyo taageerayaashooda oo u dabaaldegaya guushii ay ku hanteen koobka Jen. Daa’uud kaddib markii ay ka guuleysatay kooxda Heegan.
Daawo Sawirrada: Horseed FC oo galaba hantisay Super Cup-ka dalkeenna kaddib markii ay ka adkaatay Heegan
Naadiga Kubada Cagta Horseed FC ayaa galabta ku guuleysatay Koobka Super Cupka dalka Soomaaliya kadib markii ay la ciyaareen Naadiga Heegan waxaana Heegan looga badiyey Rigooryaal. Naadiga Horseed ayaa Waxaa ay Cayaarta ku dheeleen 9 Cayaaryahan kaddib markii ay Calaamada casaanka ah ka qaateen 2 Cayaaryahan iyaga oo Sameeyay adkeysi iskana difaacay Weeraro badan oo
Taageerayssha oo weli hadal haya guushii kooxda Horseed FC
Kooxda Kubada Cagta ee Horseed ayaa soo hoysay guul taariikhi ah kaddib markii ay hantisay koobka Jeneraal Daa’uud iyadoo 2 iyo 1 uga badisay kooxda Heegan oo ay isla soo gaareen finalka. Taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Horseed FC ayaa si diirran u soo dhaweeyay guusha ay gaartay kooxd, iyagoo arintaasi ku amaanay maamulka kooxda
Akhriso taariikhda kooxda kubadda cagta ee Horseed FC
Akhristayaasha Sharafta leh waxaan halkan idinkugu soo gudbinneynaa taariikhda kooxda kubada cagta ee Horseed FC guulihii ay gaartay iyo marxaladihii kala duwanaa ee kooxdu soo martay. Sannadihii lexdameeyadii ayaa waxaa jiray laba kooxood oo la oran jiray Xoogga iyo Booliska . kooxda Booliska ciyaartooydii u ciyaari jirtay waxaa ka mid ahaa : Saciid Ducaale, Scott,
kooxda horseed oo guulo ka gaartay horyaalka kubadda cagta ee Soomaaliya
kooxda horseed oo ka ciyaarka horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya ayaa maanta guul weyn ka gaartay kooxda jeenyo kaddib markii 2 1 ku dharbaaxday. qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay min hal gool iyadoo ciyaarta qeybteedii dambe ay kooxda horseed u suura gashay in ay gool labaad dhaliso oo ay sidaasi hoggaanka ciyaarta